Big Bag, Fibc Bag, pp-xidhkii Sack, Weelka Bag, Bag Jumbo - Baako
OPP dukumiintiyo Bag
PP Dambiisha Shopping
meeldhexaadka ah Bag
Shiraac Shopping Bag
Xidhmeen Shopping Bag
Macdanta SAARKA Exploration
Hebei Baako Co., Ltd waa mid ka mid alaab-xirfadeed ee bacaha Baakadaha kala duwan ee gobolka Hebei ee Shiinaha iyo mid ka mid ah distributors ugu weyn ee waqooyiga China, waayo, bacaha kala duwan, oo ay ku jirto bacaha Baakadaha warshadaha ee warshadaha, beeraha, dhismaha, iyo wax soo saarka macdanta in ay alaabahooda alaabta bulk iyo bacaha baakadaha maalin dukaamada, tukaanada, iyo wineshops in ay alaabahooda waxa iibsada ay doonayaan.
Our waayo-aragnimo iyo u kaliyeeli ku ool ah naga caawiyey adkeeyo xiriirka ganacsi saaxiibtinimo ee macaamiisha ka yimid dalalka kala duwan iyo degmooyinka.
Waxaan leenahay shaqaale dadaala oo midaysan, alaabo raqiis ah, iyo saarka iyo processing warshadaha wanaagsan u wada shaqaynaya. Sidaas awgeed, waxaan si fiican diyaar u tahay inay la kulmaan wax kasta oo ka mid ah shuruudaha aad suurtagal ah in wax soo saarka.
Waxaannu ku Abaal marin doonaa tala iyadoo la kaashanayo si raxmad leh, alaabta oo tayo sare leh, qiimaha tartan iyo adeeg cuntada buuxa.
Shirkadda Our waa in Shijiazhuang City ee Gobolka Hebei ee Shiinaha. Hebei waa gobol u dhow badhtamaha galbeed ee waqooyiga dalka Shiinaha iyo Shijiazhuang waa magaalada caasimada ay. Waxaan nahay oo ku saabsan 400 kiiloomitir ka fog Beijing (magaalada caasimadda ah ee PRC), 1200 kiiloomitir Shanghai (magaalada ugu wayn ee Shiinaha), oo 400 kiiloomitir u jirta Tianjin (Magaalada Kismaayo ee waqooyiga China a). Inta badan warshadaha noo dhow inay magaaladan ku jira.
Ku soo dhawoow halkan, soo dhawaynaynaa inaad xafiiskayaga ka iyo warshadaha, soo dhaweyn booqo!
Fikradda adeegga waa design, SAMAYNTA TAYO, 24HOURS TAAGEERADA. waayo-aragnimo u ururay, shaqaalaha xirfad iyo hufnaan sare waa aasaaska iyo damaanad adeegga cuntada buuxa.
Waxaan la qorsheeyo karaa bacaha sidii macaamiisha ah ee looga baahan yahay iyo isticmaalka deegaanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah ujeedooyinka gaar ah.
Standard Tayada - Iyada oo ku saleysan our waayo-aragnimo iyo goorba ururtay iyo wax soo saarka si sii kordhaysa u horumarsan, waxaan sameeyo karaa jawaan oo ku dhowaad dhammaan heerarka tayada sida ASTM, ISO, iyo Qaramada Midoobay, iwm,
bacaha dukumiintiyo OPP
bacaha shopping shiraac
bacaha Garden / cover bacaha sanduuqa /
No. 199, Xinhua Road, Shijiazhuang, 050000, Hebei, Shiinaha